इटहरीका व्यवसायी कमल पौडेलको निधन
१५९४१ पटक पढिएको
इटहरीः गएको सुक्रबार मात्रै ‘अस्पताल बसाईको असहजतामा पनि चित्त बुझाएर हाँस्न मन लाग्यो किन कि अरुको पीडा अगाडी मेरो पीडा त ५/१० % मात्र रहेछ ’ स्टाटस सहित आफ्नो फेसबुकमा हाँस्दै अस्पतालको बेडमा बसेको फोटो अपलोड गरेका इटहरीका स्थापीत व्यवसायी कमल पौडेलको बुधबार दुःखद निधन भएको छ । उनको काठमाण्डौं स्थित ग्राण्डी अस्पतालमा निधन भएको हो ।
वीपी प्रतिष्ठान धरानमा उपचार गराईरहेका उनि प्रतिष्ठानले उपचारमा बिषेश ध्यान नदिएकाले राम्रो उपचारका लागि केही साताअघि मात्र ग्राण्डी अस्पताल भर्ना भएका थिए । उनलाई हृदयघात भएको उनीसंगै अध्ययन गर्ने रामबाबु प्रसाईले जानकारी दिए । सवारी दुर्घटनामा परेका उनको खुट्टामा चोट लागेको थियो । आफैले चलाएको कारलाई धरानको तीन कुनेमा पुगेपछि धरानबाट इटहरी आउँदै गरेको बसले ठक्कर दिएको थियो । कारको एयर व्याग तत्कालै खुलेका कारण पौडेल र उनकी जीवनसंगिनी घाइते भएका थिए ।
प्रहरीले उद्धार गरि घाइते दुवैलाई वीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान भर्ना गरिएको थियो । प्रतिष्ठानमा उपचारकै क्रममा पौडेललाई कोरोना संक्रमण भएको थियो । चार पटकको परिक्षणपछि उनको रिर्पोट नेगेटिभ आएको थियो । केही दिनको उपचारपछि पौडेलकी जीवनसंगिनी अन्नपूर्ण पौडेल डिस्र्चाज भएकी थिइन् । पौडेलको खुट्टामा समस्या भएपछि प्रतिष्ठानमै रहेर उपचार गराईरहेका थिए । उनले १६ डिसेम्बर फेसकबुकमै स्टाटस लेखि दुर्घटनामा परि टुटफुट हुनु सामान्य हो भन्दै अस्पतालमा आएर स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने, सहानुभुति प्रकट गर्नेहरुलाई आभार व्यक्त गरेका थिए । प्रतिष्ठानले उनको उपचारमा वेवास्था गरेपछि उनि राम्रो उपचारका लागि ग्राण्डी अस्पताल गएका थिए । वीपीमा भर्ना हुँदा उनको उपचारका प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अर्थोपेडिक डा. राजीव महर्जन र डा. विक्रम श्रेष्ठ सहभागी थिए ।
पौडेलले २९ डिसेम्बरमा आफ्नो फेसबुकमा सवारी दुर्घटनामा परि अस्पताल भर्ना भएपछि प्रेसर तलमाथि भएको जनाउ दिएका थिए । १२० का मुनी ८० मेन्टेन गरेको मान्छे दुर्घटनामा परि अस्पताल भर्नापछि १४० का मुनी १०० हुँदैछ । यसो अनुसन्धान गर्दै जाँदा मनमा अनेक खालका कुरा खेल्दा प्रेसरको अवस्था यस्तो हुन आएको मेरो बुझाई छ । भन्ने स्टाटस लेखि आफैलाई चित्त बुझाएका थिए । यसैबीच उनको निधनले इटहरीलाई अपुरणीय क्षति भएको जनाउँदै इटहरीका व्यवसायी, राजनितिकर्मी, समाजसेवी , उनका सहपाटी लगायतले फेसबुकमार्फत स्टाटस लेखि हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन् ।